San Htun's Diary: ဂျီစီ ခရီးကြမ်း - ၃
Post becomes more and more interesting. Waiting for new post sis !!
Blogger တွေ အကုန်နီးပါး facebook ပေါ်ရောက်သွားပြီး blog တွေပေါ်မှာ ခြေရာမတွေ့တာကြာသွားပေမယ့် စန်းထွန်းကတော့ အမြဲတမ်းပဲ ပိုစ်အသစ်တွေနဲ့၊၊ High school senior ကတည်းက ဖတ်လာခဲ့တာ ခုဆို ကျနော်လည်း college မှာ senior ရောက်နေပြီ၊၊ နောက်နှစ်ဆို ဘွဲ့ရတော့မှာမို့ အင်းတမ်းရှစ်တွေရှာနေတုန်း၊၊ အတွေ့အကြုံလေးတွေ ဖတ်ချင်မိပါတယ်